Last updated: May. 20 2019 | 2 min akhri
"Waxa uu i jecel yahay. Ma uu i jecel yahay. "—Anonymous
gabar walba oo taariikhdiisu tahay nin this. Waxa uu sida caadiga ah sida xasaasiyad in gu'gu ka. Ladies, aad u ogaato script ee ...
Wuxuu u maleeyey in cawska ahaa cagaar dhinaca kale. Ama uu "loo baahan yahay in uu meel." Sidaas, digniin inta aan, inuu sameeyo ficil la waayin ka dhigi lahaa kuwo xitaa Houdini faani.
Waxaad ka qaylin. Waxaad u warsado sababta. Markaas ugu danbeyn, iyadoo qaar ka mid ah wakhtiga iyo fogaanta u dhexeysa aad, aad maamuli ay bogsiiyaan kuwa wadnahaaga iyo dhaqaaqo.
Inta badan si aad u la yaab leh, bilood / sano ka dib uu soo laabtay. Tani wakhtiga la soo fuliyaan cas, qirasho dambi dhaaf, iyo rabitaanka gubanaya dib loo daari lahaa olol jir. Marar badan, ka dib markii aad u daneeyaan in qof cusub.
The 64,000 Su'aal noqdo ... Haddii aad ku qaataan, ama waa aad ee madax xanuunka badan iyo heartaches mustaqbalka?
Well, waxa ay ku xiran ....
SIDAN XAASHIDA A khiyaameeyaan si ay adeegso tilmaan ahaan.
Ma wuxuu wada burburin mid ka mid ah xeerarka Cardinal of shukaansi ugu? Kuwani waxay noqon lahayd ma-NOS been la saaxiibkaa ama qaraabadaada, ama rabshad gacan, ama ku xad tala saarta. Haddii ay sidaas tahay, "Ayan ku aflixin tagaan."
Dhab ahaan waxaa jirtay waqti ku filan isaga in ay qaan oo isi soo wixii dhacay? Ma run ahaantii aqoonsan qaldamo ka jidadkiisa? Ama uu yahay intay higsanayeen u Dhawdahay kaliya ee wax la yaqaan?
Waa maxay sababta uu doonayo in xiriirka ay waa inaad ku cusboonaataan? Ma sababtoo ah chemistry u dhexeeya laba idinka mid ahaa mar kulul? Ma u baahan tahay inaad amaahato lacag ama meel ay joogaan? Dhibyaraan marnaba sabab wanaagsan oo middaynta. Ha u ogolaan inuu soo laabtay adeego sidii dib u dhac aad u.
Sidee buu ku dhamaan wax? Uu hab qabow iyo xishood beelay waxay Ahaa? Ama nooc oo aan eedayn? Tusaale ahaan, guys oo waddo fuley ee ay soo afjaridda dhan telefoonka xiriir si lama filaan ah, ama fariin qoraal ah oo kuu soo dirayaa in shishaysa wax waa dhif ah oo qiimihiisu geftinka la mar kale.
Ma jireen Dad wax badan oo fiican isaga ku saabsan in xun? Sameeyaan faa'iidada iyo khasaaraha liiska ka dibna si caqli ah oo ay ujeeddo leedahay waxaa la tasho. Waxa ugu muhiimsan ee, digtoon talada ah ee xikmadda of Maya Angelou ka: "Marka ay dadku idin tusin cidda ay yihiin, rumaysan. "
Sidoo kale sida ay muhiim u duruufaha ku xeeran ee aad weyni waa waqtiga. Ma uu damaanad ka soo hor Christmas? Ka dib markii aad bukootay ama hoos on nasiibkaaga? Dadka "saaxiibo cadaalad-weathered" dhif ah waxaa lagu tirin karaa waqtiyada adag. Tixgeli naftaada nasiib u yeeshay ogaaday, haddii arrinku sidan yahay. Khasaare aad jar.
Ha jebin ma bixi ookiyaalaha champagne ah weli. Tixgeli isaga qaadashada dib on "muddo tijaabo ah" oo leh "galaangal xaddidan." Si aad natiijo aan fiicnayn, kalsoonida waa in la "kasbaday" ma la wareegay.
Marka aad kor u qarxay, waxaa jiray chorus ka mid ah dadka chiming in, "Waxaan si aad u sheegay?" Haddii qof kasta oo kale u maleeyeen inuu ahaa istaahilin aad ah, waxaa laga yaabaa inay hal dhibic halkan. Tani ma uu kala dirin khafiif ah. In kasta oo jacayl noqon karaan kuwo indho, waa in aanay marna noqon mid aad u clueless.
Waxaad awoodi mar kale in uu khamaaro aad saaxiga iyo kalsooni karaa?
Si cad Waxaa jira waqtiyo qaadashada fursad noqon kartaa khamaar xun. Hadda waxaad tahay in xiriir kale oo ay leedahay awood muuqato ididiilo? Xaaladdan, ee "kid soo laabtay" Waa in aan loo oggolaan inay ku soo laabtaan!
Tixgeli taladan waqtiyaysan si wax looga qabto saaxiibka Boomerang. La ku hay in "kuwa ku fashilma in ay wax ka bartaan ee la soo dhaafay waxaa ku Qaddarray in aad ku celiso."